Huawei Enwe 9s ma nwee Obi 9tọ XNUMXe: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta | Gam akporosis
Huawei Enwe 9s ma Nwee Obi 9tọ XNUMXe: Ọkara ọhụrụ nke akara ndị China
Huawei na-akwadebe iwebata P30 ọhụrụ ọhụụ na Paris, na ihe omume nke ga - ebido n’ime awa ole na ole. Ọ bụ ezie na akara ndị China anaghị egbusi oge ma hapụ anyị ụdị ndị ọzọ. N'okwu a, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ekwentị abụọ n'ime etiti ya. Ọ bụ ihe gbasara Huawei Enjoy 9s and Enjoy 9e. Modelsdị abụọ nke anyị nwererịrị ụfọdụ leaks N'ime izu gara aga, dika anyi gwara gi.
N'ikpeazụ, Ugbua ohuru ohuru nke Huawei enwe 9s na Enwe 9e ugbua ka emeputara ya. Modelsdị ọhụrụ abụọ nke akara ndị China na-achọ iwusi ike n'etiti ya maka afọ a. Agbanyeghị na ha bụ ụdị nke nwere akụkụ dị iche na ekwentị ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara.
Ọzọkwa, O yiri ka ụdị ọhụụ abụọ a nke ndị na-emepụta China ga-abụ naanị maka ahịa ndị China. Ha na-echeta n'ụzọ dị ukwuu ka P Smart + na ika ahụ gosipụtara izu ole na ole gara aga n'otu mpaghara a. Ya mere, ha ji usoro dị ugbu a, na mgbakwunye na nkọwapụta dị mma. Anyị na-agwa gị banyere ụdị abụọ a dị n'okpuru.
1 Nkọwapụta Huawei Enwe 9s ma Nwee 9e
Nkọwapụta Huawei Enwe 9s ma Nwee 9e
Anyị na-etinye tebụl n'ime ya ị nwere ike ịhụ nkọwa nke ndị otu ọhụụ abụọ a site na etiti nke ndị na-emepụta China. Ndị a bụ ụdị abụọ dị iche iche n'ozuzu ha, ọ bụ ezie na ha abụọ ruru n'etiti etiti a. Ọ bụ ezie na Huawei Enjoy 9S na-arụ ọrụ na ngalaba dị elu, karịchaa n'etiti etiti, na ụdị nke ọzọ, na-enwe 9E na-erute obere etiti nke ndị nrụpụta China.
HUAWEI NA-EME 9S
HUAWEI Enwe 9E
IKIRU 6,21-anụ ọhịa LCD na 19,5: 9 ruru na FullHD + mkpebi (2.340 x 1.080 pikselụ) 6,09-anụ ọhịa LCD na 19: 9 ruru na mkpebi HD + (1.520 × 720 pixels)
Nhazi Kirin 710 Helio P35
Nchekwa n'ime 64/128 GB (gbasaa na kaadi microSD) 64 GB (gbasaa na kaadi microSD)
Gbanwee CAMERA 24MP + 16MP + 2MP 13MP nwere oghere f / 1.8
N'ihu CAMERA 8MP nwere oghere f / 2.0 8MP nwere oghere f / 2.0
OS Akara 9.0 achịcha na EMUI 9.0 Akara 9.0 achịcha na EMUI 9.0
UMUAKA 3.400 mAh 3.200 mAh
Njikọ WiFi, microUSB, isi okwu isi, GPS, GLONASS, LTE / 4G WiFi, microUSB, isi okwu isi, GPS, GLONASS, 4G / LTE
NDỊ ọzọ Mkpisiaka agụ Mkpisiaka agụ
Nke mbụ nke ụdị abụọ ahụ doro anya na ọ kachasị ike, n'ihi ọnụnọ nke igwefoto nwere okpukpu atọ, nke ga-abụ ihe ga-eme ka ọtụtụ ndị ahịa nwee mmasị na ahịa. Ya mere ọ bụ ihe nlere anya iji tụlee maka ndị ahịa a. Ihe bụ ihe ọzọ, na-eji Kirin 710 n'ime, nke bu ihe nhazi nke ika China maka nke a nke di n'etiti.
Ọ bụ ezie na Huawei Enwe 9E bụ ihe atụ dị mfe karị. Na akụkụ, ọ bụ ekwentị nwere ike ichetara ụfọdụ Y6 Pro 2019 nke e gosipụtara n'oge gara aga, ma na nhazi na nkọwa, anyị nwere ike ịhụ na ngwaọrụ abụọ ahụ nwere akụkụ jikọrọ ya na nke ahụ. Mana egosiri ya dika ihe nlere anya nke oma maka etiti. Ọ bụ ezie na nhọrọ nke ihe nhazi ahụ bụ ihe ọtụtụ na-agaghị emecha kwenye.
Huawei Y6 Pro 2019: affordabledị ọnụ ahịa ọhụụ ọhụrụ
N'ihe banyere Huawei Enwe 93, anyị ga-echere ruo 8 Eprel maka ịmalite ya na ahịa na China. Ọ na-eme ya na otu ụdị nke nwere 3 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa. A malitere ya na ọnụahịa nke yuan 999 (Euro 130 ịgbanwe). N'okwu a, a na-ebupụtakwa ya na ọtụtụ agba, otu n'ime ha nwere ụdị akpụkpọ anụ sịntetik.
N'aka nke ọzọ anyi nwere Huawei Enwe 9S, nke ebuputara na onu ahia nke 1.499 yuan (197 euro iji gbanwee) na ụdị ya dị ọnụ ala. A ga-enwe nsụgharị abụọ, ha abụọ nwere 4 GB nke RAM, mana nchekwa ahụ dịgasị na 64 ruo 128 GB dabere na ụdị ahụ. Ekwentị na-oru na atọ dị iche iche na agba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei Enwe 9s ma Nwee Obi 9tọ XNUMXe: Ọkara ọhụrụ nke akara ndị China
Emeputara Alcatel 1X 2019 na Spain
Samsung Galaxy Note FE na-enweta mmelite ahụ na A gam akporo